Arday aan tallaalneyn oo Iskuulada Rochester ay fasallada ka saareen -
Dugsiyada Dadweynaha ee magaaladdaRochester ee gobolka Minnesota aya maanta oo Arbaco ah, bisha Maarsona ay tahay 3/1/2017 fasallada ka saaray 80 ardayda fasallada. Ardaydan ayaa sababta fasallada looga saaray ay tahay in ay soo xaqiijin kari waayeen in la tallaalay iyo inkale.
Sidoo kale waxay ardaydan waalidkood ay keeni waayeen cadeyn rasmi ah oo u ogolaaneysa in arrimo la xiriira diin ama mid kamid ah qodobada sharciga u ogolanaaya waalidiinta in ayna tallalin carruurtooda soo bandhigaan ama Iskuuladda u keenaan.
Ardaydan ayaa saaka subaxii hore markii ay iskuulka yimaadeen loo diray xafiiska maamulayaasha iyo shaqaalaha dugsiyadda, iyada oo la isku dayayo, ardaydana laga caawinayo in ay la xiriiri qoysaskooda si ay waalidkooda uga helaan ama u weydiistaan dukumentiyada looga baahan yahay.
Haddaba arrintan ardayda ay tiradoodu dhantahay 80 looga saaray ayaa la xiriirta tirradda ardayda ama carruurta aan tallaalneyn oo sii badanaysa. Maamulka Dugsiyadda Dadweynaha ee magaalada Rochester ayaa sheegay in ay aad iyo aad iskugu dayeen sidii ay ula shaqeyn lahaayeen waalidiinta iyo dhamaan qoysaska ilaa iyo bishii Janaayo.
Shaqaalaha arrintan u qaabilsan dugsiyadda ayaa warbaahinta u sheegay in ay ku wargeliyeen qoysaska in ardaydoodu u baahan yihiin cadeyn ah in la tallaalay si ay dugsiga u dhigtaan, ama keenaan waraaqo cadeynaya in laga dhaafay ama waalidka loo ogolaaday in ayna carruurtooda tallaalin.
Arday ay tirradoodu dhantahay 204 ayaa weli aanan buuxin shuruudaha tallaalka ee dugsiyadda dadweyanaha ee magaaladda Rochester ay ka codsatay qoysaska dhalay ardaydan todobaadkii hore, taasoo keentay in mas’uuliyiinta iskuuladu maanta ay qaataan tallaabo aan caadi ahayn. Waalidiinta ayaa markale laga codsaday in ay soo gudbiyaan warqadaha looga baahan yahay ama ardayda laga saari doono dugsiyadda.
Related Items:Featured, Health, local, Somali community, Somali immigrants, Somali Minneapolis